जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपाको कार्यदिशा होइन
१३ कार्तिक २०७६, बुधबार ११:१२
तर, जनताको जनवाद भनेको पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो भन्ने भ्रामक कूतर्क गर्न मिल्दैन। पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक कार्यदिशालाई आफ्नो निहित स्वार्थभित्र हालेर व्याख्या गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुन्छ।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र स्कूलबाट आएका एमाले र माओवादी एकीकृत भएर नेकपा बनेका छौं। नेकपाको आधिकारिक कार्यदिशा हो, समाजवादउन्मूख जनताको जनवाद। कतिपय साथीहरु एकताको स्प्रीडको अनुभूति गराउन जनताको बहुदलीय जनवादको ठाउँमा जनताको जनवाद भनिएको तर यी दुवैको अन्तरवस्तु एउटै भएको तर्क गर्दै हुनुहुन्छ, जुन साँचो होइन। जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवादबारे निम्न कुरा बुझ्न जरुरी छ।
पहिलाे, जनताको जनवाद बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहित समाजवादमा जाने राजनीतिक कार्यदिशा हो, बहुलवादमा आधारित पूँजीवादी–जनवादी कार्यक्रम होइन। तर, जनताको बहुदलीय जनवाद पूँजीवादी–जनवादी राजनीतिक कार्यक्रम हो। जनताको बहुदलीय जनवादले पूँजीवादी–जनवादी कार्यक्रम संस्थागत गर्दछ। तर, जनताको जनवादले समाजवादको आधार तयार पार्दछ, जसलाई सामाजवादउन्मूख भनिएको छ।
दाेस्राे, पार्टीभित्र वैचारिक बहसको ढोका बन्द भएको छैन, यस मानेमा पार्टीभित्र जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षमा बहस गर्न मिल्छ, पाइन्छ पनि। तर, जनताको जनवाद भनेको पनि जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो भन्ने भ्रामक कूतर्क गर्न मिल्दैन। पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक कार्यदिशालाई आफ्नो निहित स्वार्थभित्र हालेर व्याख्या गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुन्छ।
तेस्राे, जनताको बहुदलीय जनवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद र माओवादबारे खुल्ला बहस आवश्यक छ। आजको २१ औं शताब्दीको समाजवादी क्रान्तिका लागि नेपाली मौलिकताको कार्यदिशा के हुन सक्छ ? त्यसबारे कुनै आग्रह र पूर्ववत् समूहका आधारमा होइन, क्रान्तिको चिन्ताका आधारमा बहस गरेर मात्र हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। यो बहसमा हाम्रो संविधानले गरेको परिकल्पना र व्यवस्थालाई पनि गहिरो गरी मनन् गर्न जरुरी छ।
चाैंथाे, हामी एकताको नयाँ चरणमा छौं। संगठनको एकताले मात्र पार्टी एकता पूर्ण हुन सक्दैन। यसका लागि वैचारिक, राजनीतिक एकता मात्र होइन, कार्यदिशाको बुझाइमा एकता र भावनात्मक अन्तरघुलन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। पार्टी होइन, गुट बनाउने र गुटकै अभ्यासबाट नेतृत्व हत्याउने चालबाजीले पार्टीको हित गर्दैन, जनताको आकांक्षा सम्वोधन हुँदैन। त्यसैले पूर्ववत् समूहको घेराबाट माथि उठ्नु आजको सन्दर्भमा पार्टी एकताको महत्वपूर्ण शर्त हो।
पाँचाैं, विचार वा सच्चाइ बहुमत र अल्पमतका आधार निर्धारण हुँदैन। बरु, इतिहास र वर्तमानको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुन्छ। हाम्रो आकांक्षा समाजवाद भएकाले हाम्रो चिन्ता पनि समाजवादको हितकै लागि हुनुपर्छ। विचारलाई प्रतिष्ठाको विषय होइन, जनसमुदायको हित र क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ। यसले मात्र कथनी र करनीमा समाजवादप्रति इमान्दार भएको मान्न सकिन्छ।
छैटाैं, अहिले हामी एकताको उत्कर्षमा छौं। महाधिवेशनसम्म समझदारीका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधान हामीले नै पारित गरेका छौं। यो बेला गुटको भेला गर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानका नाममा पूर्ववत् समूहकै स्कूल चलाउने बेला होइन। बरु, सबै पृष्ठभूमिका कमरेडहरुलाई एउटै मञ्चमा राखेर हार्दिकतापूर्वक खुला छलफल गर्ने बेला हो। यसले मात्र पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन सक्छ।
साताैं, हरेक शब्दभित्र अन्तरवस्तु हुन्छ। राजनीतिक कार्यदिशा पनि त्यसबाट अलग हुन सक्दैन। समाजवादउन्मूख जनताको जनवाद शब्दले नै कार्यदिशाको गुरुत्व बोकेको छ। यसको अवमूल्यन गर्नु समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्यसँग असहमत हुनु हो। तसर्थ, खुल्ला बहस गरौं, समाजवाद पनि भन्ने, अनि समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाका विरुद्ध पनि उभिने गल्ती नगरौं। यसले कसैको पनि हित गर्दैन।
अमेरिकामा राम्रो जागिर कसरी पाउन सकिन्छ ? (१० टिप्स्)